Wafdi ka socda Guurtida Gobolada dhexe oo soo gaaray Gaalkacyo – SBC
Wafdi ka socda Guurtida Gobolada dhexe oo soo gaaray Gaalkacyo
Wafdigaan ayaa ka koobnaa 21 xubnood ku waasoo isugujira Malaaqyo, Nabadoono iyo odayaal dhaqameed iyagoosheegay iney kulan kula soo yeesheen Magaalada cadaado ee maamulka Ximin iyo xeeb oo ay sheegeen iney ka wadahadleen sidii loo joojin lahaa dagaalada sokeeye ee ka taagan deegaanka Dhagtuur.
Wafdiga ayaa waxa ku soo dhaweeyay magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug odoyaal dhaqameed iyo guurti kala duwan, waxaana lageeyay Hoteelka Embaasy, halkaas oo ay kulan xog wareeysiya ay kula yeesheen odayaasha iyo maamulka Gobolka Mudug iyagoo ka codsaday ineey ka aqbalaan nabada ay wadaan oo ay doonayaan iney ku hishii siiyaan labada beelood ee walaalaha ah.
Waxaa kulan kaasi ka halay nabadoon Cali Diiriye Aloore oo u sheegay iney diyaar u yihiin nabada iyo wada hadalka ay ka codsaden walaalahooda u soo gurmaday sidii colaadaasi loo damin lahaa waxaana kaloo uga mahad naqay imaatin kooda.
Waxaa soo xiray kulan kaasi madaxweeynaha Galmudug Maxamad Axmad Caalin asagoo ku wareejiyay furihii nabada una cadeeyay ineey dhabkatahay soo dhaweynta iyo nabad qaadashada.
Imaanshaha Wafdigaan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa Xili dagaalo xoogan ay ka dhaceen Deegaamka Dhagtuur ee Gobolka Mudug halkaasi oo ay dirir ku dhexmarayso labo maleyshiyo beeleedyo ka soo kala jeeda Galmudug iyo Xima iyo xeeb.